“Waxaan ka qoomameeyay inaan caawiyay Luis Suárez” – Gool FM
(Barcelona) 26 Nof 2020. Kabtanka kooxda Liverpool ee Jordan Henderson ayaa u muuqda mid ka qoomameynaya inuu xirtay funaanad uu ku taageerayo Luis Suarez, saaxiibkiisii ​​hore ee garoonka Anfield kahor bilaabashada kulan dhex maray Reds iyo Wigan 2011-kii.
Xiddiga reer France ee Patrice Evra, oo ah daaficii hore ee kooxda Manchester United, ayaa waxay isku dhaceen Suarez kulankii labada koox ee ka dhacay garoonka Anfield bishii October ee 2011, iyadoo weeraryahanka reer Uruguay lagu soo rogay ganaax 8 kulan kaddib baaritaan labo bilood ah oo ay sameysay FA, lagu daray ganaax lacageed dhan 40,000 pounds.
Maalin kaddib ganaaxa Luis Suárez, kahor ciyaartii Wigan, asxaabtiisa kooxda ayaa u muujiyay garab istaag buuxa iyagoo soo xirtay funaanado ay ku qoran yihiin “Suarez 7”.
Haddaba wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa daabacay wareysi uu bixiyay Jordan Henderson, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Wax badan ayaan ka baranaynaa khibradaha, waxaan ahaa ciyaartoy da’ayar ah waqtigaas, sidaas darteed arrintan waxay ahayd wax aanan horay u arkin.”
“Hadii aan hada dib u laabano, ma hubo in kooxda ama qof walba uu u dhaqmay sida ugu fiican.”
“Aragtidayda ciyaartoy ahaan, fikirkeenu wuxuu ku saabsanaa Luis iyo sidii aan isaga ku ilaalin laheyn, laakiin runti kama anaan fikirin Patrice Evra.”
“Dadku waxay dhihi doonaan, waad yara daahay, laakiin waxaan u maleynayaa inaad yara habsaantay waxay ka wanaagsan tahay inaadan raali gelin buuxda bixin.” ayuu yiri Kabtanka haatan ee kooxda Liverpool asigoo ka qoomameeyay garab istaagii uu u sameeyay Luis Suárez.